Cyberpunk 2077 waxay ku hayn doontaa 80 GB wadadaada adag - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Cyberpunk 2077 waxay kuugu jiri doontaa 80 GB oo ku taalla dariiqaaga adag
Cyberpunk 2077 dhab ahaantii waa mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee 2020. Macluumaadku wuxuu yimaadaa faleebada. Maanta, wax badan ayaan ka ogaanay booska ciyaarta.
At E3 2019, CD Projectekt Red ayaa soo bandhigay cayaarta soo socota, Cyberpunk 2077. Kulanku ma iman doono kahor 2020. Sidaas awgeed waxaad haysataa waqti badan oo aad ku diyaariso dariiqaaga adag, sababtoo ah, sida laga soo xigtay warbixin ka timid Baska Cadaadiska, Cyberpunk 2077 waa inaysan ka yarayn 80 Go.
Cyberpunk 2077 waxay lahaan laheyd xNUMX GB of space disk
Taas waxaa la yiraahdaa, waa in la ogaadaa in shaxdani tahay midda PS4 version of game, waa in ay ka duwan tahay Xbox One iyo PC, laakiin taasi waa in aysan si weyn u kala duwan yihiin. Wixii macluumaad ah, Cyberpunk 2077 hubaal noqon doonaa cayaarta ugu weyn ee barnaamijka Red Enchildren weligeed, laba jeer oo ah cabbirka Witcher 3.
Wixii PS4 version ugu yaraan
Cayaartu waxay ka dhacaysaa mustaqbalka - iyadoo cinwaankeedu yahay, shaki kuma jiri doono - waxaanu soo bandhigi doonaa actorada Keany Reeves. Dabeecadda ugu weyn waxaa loo qaabeeyey si ay u egtahay. Ma noqon doonto markii ugu horeysay ee horumariyayaashu ay abuuraan jilayaal u eg jilayaal iyaga oo labadooda isku dhejinaya. Dhimashada Dagaalka by Hideo Kojima, waxaa jiri doona dabeecad u eg sida Norman Reedus oo waxaa laban laabi doona Norman Reedus.
Cyberpunk 2077 waxaa loogu talagalay 16 April 2020. Calaamadaha horeyba waa kuwo furan.
Google Stadia: Phil Harrison wuxuu sharxayaa qiimaha ciyaaraha daruuriga ah
Abaalmarinta Xurmeynta Xogta: Dhibbanayaasha ugu weyn ee E3 2019 waa la yaqaan
Nintendo wuxuu kordhin karaa dalabkiisa ku yaala Isbeddelka Internetka
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/cyberpunk-2077-occupera-jusqua-80-go-sur-votre-disque-dur-320880
Tim Cook wuxuu isku dayaa inuu u diro emailkiisa kadib markii uu ka tagay Jony Ive
Dhammaadka cayaarta ayaa ku garaaci karta 'Muuqaalka' ee sanduuqa sanduuqa ka dib marka dhan - BGR
Switzerland: 'Dagaalku wuu bilaabmayaa': Dhibbanaha khatarta bangiga 'Exxty Credit Suisse' ayaa weli doonaya raali galin
Queen Elizabeth II ayaa lagu khasbay inay dib u dhigto fasaxeeda